PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - Kumqoka ukubuye uziwashele imoto
Kumqoka ukubuye uziwashele imoto
Isolezwe - 2018-09-14 - EZEZIMOTO -
ANGIPHAKAME nokubingelela abalandeli nababafundi bale ngosi ngethemba lokuthi sonke sisawufaka siwukhiphe.
Ngithembe ukuthi sonke sesimi lapho kuphephe khona futhi sakhumbula ukushaya am-hazard ethu ukuze labo abasajahe ukuyothenga elabo eliwela umfula ugcwele badlule ngaphandle kokuphazamiseka.
Namhlanje ngihlokoloza ama-hazard ngisendaweni kuyogeza izimoto ndawana thize eThekwini emva kokuxova udaka eNyokeni, KwaNongoma, lapho kade ngiyobukela khona uMkhosi woMhlanga.
Imoto engihamba ngayo ibuye ungafunga ukuthi idlule obhukwini lwamahewu odaka kanti amaxhaphozi amanzi angcolile ebengibuye ngihambe kuwo kwazise le nqokonqoko eyakho vele ukuhamba odakeni. Ngingene kule ndawo yokugeza izimoto kwabaleka abafana abasebenza khona ngenxa yokwenqena ukugeza imoto ebhubhayo ukungcola.
Uma ngibabuza ukuthi babalekelelani bathi imoto ingcole kakhulu. Ngisamangele kuqhamuke imenenja yale ndawo ingazise ukuthi imoto izogezwa ngemali ethe xaxa kunejwayelekile.
Iveni elingumakhanda-khanda ocokeme ibiza u R60 ukuyigeza kodwa ngenxa yokuthi isingcole kakhulu kunokujwayelekile bathi sebezofaka uR20 ngaphezulu.
Ngiyabaxolela ngoba abantu basemadolobheni bazi ukuthi imoto uma kuthiwa ingcolile kusuke kukhulunywa ngemoto elele uthuli nje ongaluphephetha ngomoya lusuke.
Kodwa-ke le ngosi yanamhlanje izama ukukuvezela ukuthi imoto egeziwe uyibona ngani. Kubuhlungu-ke ukuthi iningi lezimoto ezigezwa ezindaweni zokugeza izimoto zibuya zingagezisisekile njengayo lena engiyigeze ngoR80 esikhundleni sikaR60.
Kufanele wazi ukuthi ukubhixa amafutha okucwebezelisa amasondo nezinye izingxenye akusho ukuthi imoto igezekile. Imoto egeziwe kufanele ingasali nemijuluko eyimizizima yokukhombisa ukuthi amanzi adlule la.
Imoto egezisisiwe kufanele isulisiswe kungasali mabala. Akufanele imoto ekhokhelwe imali yokugezwa ibuye namabala akhombisa ukuthi ike yahamba ebusuku kwafela izintethe, izinhlwabusi namavemvane embonjeni wayo.
Ikhwapha akufanele lisale nenhlabathi noma udaka uma imoto igezisisiwe. Akufenele ibuye nothuli olwakhele lapho kuhlangana khona izicabha nomzimba uma igezisisiwe. Akufanele ibuye neshanda elingageziwe lasulwa kahle okhakhayini lwayo noma ngabe iphakeme noma inkulu kangakanani.
Imoto egezisisiwe kufanele igezwe irimu nengaphakathi layo lingabi nothuli. Emotweni eyiveni enetende elihlukene nekhanda layo, kusho ukuthi nalawo mawindi omabili ahlanzeke.
Le moto ebengiyoyigeza ngibuye ngivuleke amehlo ngakhumbula ukuthi indawo evame ngabantu abagezisisayo emotweni batholakala emarenki amatekisi.
Uma iningi labanikazi bezindawo ezigeza izimoto bengagxila ekugezisiseni bangajahi ukuzibhixa amafutha nokuzifutha ngempompolo yamanzi zingaphepha nezimoto zethu ekuqaqelweni ukuthomba okungadalwa ukwakhela kothuli nodaka ezindaweni eziyizingxoxi zemoto. Kungaba yicebo elingcono ukuthi sibuye sizibambele ngezandla zethu ngoba lokho kuyalekelela ekutheni igezeke kahle nokuthi ubone ngisho izibazi ezinganakekile.
Hhayi-ke sesingawavala la ama-hazard ethu ngelithi iningi lezindawo ezigeza izimoto liyanyanyalata.
Masiqhubeke nokushayela ngesizotha nokuhlonipha yonke imithetho yezokushayela ebusa lelizwe ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le nkundla. Kungenjalo asitholane ekhasini lethu Igedlela Lami with Sthembiso Shangase kuFacebook. Yimi owenu nali ikheli: hazardiso@gmail.com